नर्सले बिरामीलाई भाइटीका लगाइदिँदा पीडा बिर्सिएर रमाउन थाले बिरामी…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
नर्सले बिरामीलाई भाइटीका लगाइदिँदा पीडा बिर्सिएर रमाउन थाले बिरामी…हेर्नुहोस् ।
मंग्सिर २, २०७७ मंगलबार 4
चितवन : बिरामी परेर अस्पताल भर्ना हुनुपर्दा चाडपर्व मनाउन सम्भव नै भएन । सबैले पर्व मनाइरहँदा बिरामी भने विगतका पर्व सम्झेर अस्पतालको श्यया मै टोलाएर बस्नु बाहेक अर्काे विकल्प हुँदैन ।
चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरमा आज फरक दृश्य देखियो । अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई त्यहाँ कार्यरत नर्स एकाएक दिदी बहिनी बनेर भाइटीका लगाइ दिए । पर्व सम्झदै बसेका बिरामीमा एकाएक खुशीको सञ्चार भयो । बि’रामीहरु आफ्नो पी’डालाई बिर्सिएर रमाउन थाले ।
नर्सहरुले श्ययामा सुतिरहेका बिरामीहरुलाई भाइटीका लगाएको अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रताप देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । अस्पतालमा उपचाररत् १५७ जना बिरामीलाई भाइटीका लगाइएको हो ।
अस्पतालकी नर्सिङ अधि’कृत अंकिता कुँवरले पुरुष बिरामीहरुलाई उहाँहरुकै श्ययामा पुगेर भाइटीका लगाएर दी’र्घायुको कामना गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “हामीले पनि आफ्नो दाजुभाइलाई टीका लगाउन पाएनौं, उहाँहरुले लगाउन पाउनु भएको थिएन । जहाँ जस्तो अवस्थामा छौं, त्यहीँ रमाऔं भनेर टीका लगाइदियौं ।”
नर्सिङ अधिकृत अर्चना सेढाईको भनाई पनि उस्तै छ । पर्वको दिन बिरामीसँगै खुशी साट्न पाउँदा आफूहरु र बिरामी दुवै हर्षित भएको उहाँले बताउनुभयो । बरिष्ठ स्टाफ नर्स समिना मिया, नर्स सुस्मा गुरुङ पनि अस्पतालमा बिरामीलाई दाजुभाइ सम्झेर टीका लगाउन पाउँदा सेवासँगै ममता पनि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
भरतपुर महानगरपालिका १० का ४३ वर्षीय मधुकर लामा पर्व सम्झेर बसिरहेको समयमा एक्कासी भाइटीका लगाउन पाउँदा आधा बिमार निको भएको जस्तो अनुभव भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँ मात्रै होइन भरतपुर २८ का श्रीकृष्ण पोखरेल, भीमसेन गाउँपालिका गोरखाका रिदम मरहट्टा, हेटौंडा कमानेका
रमेश देउजा पनि अस्पतालमा भाइटीका लगाउन पाइन्छ भन्ने कल्पनासम्म नगरेको जानकारी दिनुहुन्छ । अस्पतालले दिएको मायाले धेरै खुशी लागेको उहाँहरुको भनाई छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटा बिरामीलाई सेवासँग ममता पनि चाहिन्छ भन्ने भावनाले पर्वको अवसरमा टीका लगाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुहुन्छ । सो अवसरमा बिरामीलाई नर्सहरुले टीका लगाउनुको भाइमसला, फलफूल तथा मीठाइ वितरण गर्नुभएको थियो ।
Prevखानाका लागि खुलामञ्चमा पुगेका सर्वसाधारणलाई भाइटीका !
Nextफेसबुकका मालिक मार्क जुकरवर्गका हेर्ने पर्ने महत्त्वपूर्ण ३० भनाइहरू…पूरा पढी सेयर गर्नुहोस् ।
आजको राशिफल : वि.सं. २०७७ फागुन ५ गते बुधवार ।। श्री पाथीभरा माताले सबैको कल्याण गरुन
महान श्रीमानले अस्पतालमै मनाइदिए अनिताको जन्मदिन ! यस्तो बन्यो माहोल…हेर्नुहोस्। (भिडियो सहित)
नेपालको नामबाट ‘गणतन्त्र’ हटाएको राम्रो, अब ‘संघीयता’ पनि खारेज गर्नुपर्छ : सांसद लिङ्देन…हेर्नुहोस् ।
असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1288)
मेलम्ची बजारमा घरको छतमा मानिसहरु फसे, उद्दारमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर (413)
के तपाईं घरमै बसिबसी चालक अनुमतिपत्र लिन चाहनुहुन्छ ? (355)
२.	असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1288)
५.	मेलम्ची बजारमा घरको छतमा मानिसहरु फसे, उद्दारमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर (413)
६.	के तपाईं घरमै बसिबसी चालक अनुमतिपत्र लिन चाहनुहुन्छ ? (355)